Sakafo atody | Nutri Diet
Angamba tototry ny fahitana sakafo be dia be amin'ny Internet isika, misy karazany isan-karazany, ny sasany mampitombo ny proteinina, ny sasany manary gliosidra, ny sasany manala siramamy na ny menaka, na izany aza, tsy misy amin'izy ireo no ilaintsika mampihena. amin'ny fahasalamana.
Mila sakafo feno sy voalanjalanja isika, toy ny sakafo atolotray antsika ankehitriny, ny fihinanana atody. Sakafo ara-pahasalamana ary inona hanampy anao hamoy ny kilao tadiavinao izany.
Ny fihinanana atody Fitsaboana mety indrindra ny mampihena ny lanjany ao anatin'ny fotoana fohy, tonga lafatra izy io mba hanatsarana ny fivoaran'ny hozatra ary hampitombo ny angovo sy ny herin'ny vatana.
El atody Sakafo tena mahasoa izy io ary hita ao amin'ny ankamaroan'ny trano sy sakafo ankafizin'ny olona. Manome tombony lehibe ny atody ary vokatra azo idiran'ny maro an'isa.
Izy io dia misy ny mazava ary ny Bud, ny fotsy dia manankarena amin'ny proteinina, vitamina E, vy, mineraly, iode ary selenium. Manome antsika fotsiny izy io 17 kaloria raha manome antsika ny mavo 60.
1 Sakafo atody
2 Menu hanarahana ny fihinanana atody
2.1 Avela ny sakafo maraina
2.2 Sakafo avela
2.3 Avela ny sakafo hariva
3 Tombony amin'ny fihinanana atody
Ity sakafo ity dia misy drafi-pisakafoanana mifototra amin'ny atody ho mpiorina na mpampifandray lehibe. Ity sakafo ity dia azo afangaro amin'ny fanaontsika mahazatra mahazatra isaky ny telo andro mba tsy hisy zavatra mavesatra ary azo tanterahina tsara.
Ireto misy toetra mampiavaka an'ity sakafo ity:
Ny atody dia tsy maintsy Cook ka ny proteinina dia azo ampidirina ao anaty vatana.
Ny sakafo dia tokony hatao manao fampisehoana mandritra ny herinandro.
Raha manao deporte sa is bevohoka tsy ampirisihina hanaraka azy mafy isan'andro.
Tsy maintsy imanolotra sakafo bebe kokoa salama mba hamenoana ny sakafo.
Manolo-kevitra ny hampihena ny lanjany ao anatin'ny fotoana fohy.
Tonga lafatra ho an'ny atleta izay te hampitombo ny hozatra.
Afaka mihena ianao telo kilao isan-kerinandro.
Mamelombelona ny fahazotoan-komana ary mamela antsika tsy hanana ahiahy amin'ny karazan-tsakafo sasany.
Mahasoa ny atody satria manampy amin'ny fifehezana ny kolesterola, manankarena amin'ny proteinina ary manentana ny fandaniana angovo lehibe kokoa satria mampitombo ny metabolisma.
Alohan'ny hanombohana ity sakafo ity dia tsara ny manatona manam-pahaizana manokana na ny sakafon- haneho hevitra momba ny fikasanao hanatanteraka izany mba hahafahan'izy ireo manoro hevitra anao tsara momba ny torolàlana sy ny tolo-kevitr'izy ireo arak'asa.
Zava-dehibe izany mijanona ho hydrated mandritra ny herinandro izay anaovana ny régime mba hahafahan'ny vatana manary poizina amin'ny urine.
Menu hanarahana ny fihinanana atody
Avela ny sakafo maraina
Atody nandrahoina 2 sy voankazo misy fizaran-taona.
Kafe misy ronono skim sy atody roa nandrahoina.
Atsofohy, sombin-mofo feno miaraka amina vorontsiloza ary atody nandrahoina.
Salady sy akoho.
Atody nandrahoina 2 sy legioma steamed.
Legioma steamed, fromazy osy ary atody roa nahandro.
Salady misy sardine am-bifotsy na tuna am-bifotsy tsy misy menaka sy atody roa nahandro.
Legioma etona sy tratra akoho.
Salady lovia lehibe.
Salady akoho sy atody nandrahoina.
Trondro sy salady voatono.
Avela ny sakafo hariva
Voankazo, salady ary atody roa nandrahoina.
Salady sy trondro voaendy.
Salady sy atody roa nahandro.
Legioma etona ary akoho.
Salady legioma, voasary ary atody roa nahandro.
Legioma nandrahoina sy atody nandrahoina.
Tsy dia misy gliosida ity sakafo ity, mandritra ny sakafo maraina ihany no azonao ihinanana mofo, ka azo antoka ny fihenan-danja.
Ny sakafo dia tsy maintsy ampiarahina amin'ny fanatanjahan-tena antonony ihany koa mba handrosoana ny fihenan-danja ary miorim-paka ny vatana, ho fanampin'izay dia hanampy ny hozatra hanana volabe kokoa ary salama sy matanjaka.
Tsy tokony hijanona amin'ny fampidirana sakafo toy ny:
Sakafo manankarena amin'ny omega 3.
Proteinina niavian'ny biby na legioma.
kosa, mila misoroka ireto sakafo manaraka ireto isika mba tsy hihena ny sakafony.
Ny zava-pisotro misy alikaola dia tsy tokony hosotroina.
Sakafo haingana na junk.
Mahandro amin'ny sira be dia be.
Sakafo efa nomanina sy nangatsiaka.
Tombony amin'ny fihinanana atody
Ity sakafo ity dia manasongadina andiany tombony mahasoa antsika rehetra raha manao azy tsara. Hilaza aminao momba azy ireo eto ambany izahay mba hitadidinao azy ireo foana:
Tsy sakafo famerana kaloria izy io.
Mihazona fifandanjana mety amin'ny fanjifana sakafo.
Tsy maintsy ampiarahina amin'ny fanatanjahan-tena izany.
Manankarena proteinina izy io.
Manome fahatsapana fahafaham-po lava kokoa.
Ny atody masaka dia tsy maintsy omanina mba hampidirina tsara ny otrikaina.
Natao ho an'ny olon-dehibe ity sakafo ity izay te hihena haingana, satria fatiantoka 3 kilao no tratra, na izany aza, izahay dia manoro hevitra ny hanelanelana herinandro iray amin'ny sakafo misy sakafo mahasalama izay ampidirina ny sakafo hafa, ka tsy hanana tsy fahampiana ny vatana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo atody